Kudengenyeka kwenyika kwakasimba kunorova Bali, kuuraya vanhu vatatu nekukuvadza 3
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Indonesia Kuputsa Nhau » Kudengenyeka kwenyika kwakasimba kunorova Bali, kuuraya vanhu vatatu nekukuvadza 3
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Indonesia Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Resorts • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Kudengenyeka kwenyika kwakasimba kunorova Bali, kuuraya vanhu vatatu nekukuvadza 3.
Vanenge vanhu vatatu vaurawa uye vamwe vanomwe vakakuvara nekuda kwekudengenyeka kwenyika kuIndonesia 'Chiwi cheVamwari'.
Kudengenyeka kwenyika kwakakura kwakarova chiwi chevashanyi cheIndonesia cheBali nguva dzemangwanani nemusi weMugovera.
Kudengenyeka kwenyika kwakanyanya kunzwika mumatunhu eKarangasem neBangli kumabvazuva kwechitsuwa.
Kudengenyeka kwenyika kwekutanga kweBali kwakateverwa nekukura kwe4.3 kukura.
Kudengenyeka kwenyika kwakakura kusvika 4.8 kwakazununguka Indonezhiya's vashanyi paradhiso chitsuwa che Bali kunze kwayedza nhasi.
Kudengenyeka uku kwakanyanya kunzwika mumatunhu eKarangasem neBangli kumabvazuva kwechitsuwa ichi, zvichikonzera vanhu kutiza dzimba dzavo nekutya.
Iyo US Geological Survey yakaisa ukuru hwekudengenyeka kwenyika pa4.8, ichiti nzvimbo yayo yaive makiromita makumi matanhatu nemaviri (62 mamaira) kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwedhorobha rechiteshi Singaraja pakadzika kwemakiromita gumi. Kudengenyeka kwekutanga kwakateverwa nehukuru hwe38.5 shure.
Vanhu vanosvika vatatu vaurawa uye vamwe vanomwe vakakuvara nekuda kwekudengenyeka kwenyika.
Vaviri veavo vakaurayiwa vakavigwa pasi pevhu rakakonzerwa nekudengenyeka, uye mumwe akabatwa, musikana ane makore matatu ekukura, akarohwa nemarara anowira. Vaya vakakuvara kazhinji vakatambura kutsemuka uye maronda emusoro, zviremera zvemunharaunda zvakati, vachiwedzera kuti ivo vachiri kuunganidza data pamusoro pekukuvara nekuparadzwa.
Bali, iyo inowanzodaidzwa kunzi 'Chiwi chevaMwari', yakangovhurwa kune vashanyi vekunze kutanga kwesvondo rino mushure memwedzi gumi nemisere ye curbs yakanangana nekumisa kupararira kwe COVID-18. Nekudaro, vashanyi vekunze vanotarisirwa chete kutanga kumhanyira kuchitsuwa mwedzi unouya sezvo nendege dzakananga dzenyika dzisati dzatanga futi.
Indonezhiya inzvimbo huru yezvitsuwa, iri pane inonzi 'Ring of Fire' - nzvimbo ine makomo anoputika nemitsetse yekukanganisa muPacific Ocean - saka kudengenyeka uye kuputika zvakajairika kurudzi rwemamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe.
Kudengenyeka kwenyika kukuru kwakaitika munyika muna Ndira. Yakanga iine hukuru hwe6.2 uye yakakonzera kufa kwevanhu vanosvika 105 uye vangangoita mazana matanhatu nemazana mashanu ekukuvara.